Mụọ Ngwa igwe. Ihe onwunwe, ihe atụ na nkuzi - Ikkaro
Amamịghe echiche, mmụta igwe, mmụta miri emi. ha niile na-abawanye echiche. Ọ dịka ọ dị ihe site n’ọdịnihu, mana eji ya eme ihe karịa na mpaghara niile nke ndụ. Ọ bụghị naanị na ,ntanetị, ọ bụghị naanị na ọhụụ kọmputa. Ha na-achọpụta ọrịa, ịkachasị nsogbu, ịnya ụgbọ ala na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Kedu ihe anyị ga-ekwu maka ya
Anyị agaghị ebipụta akụkọ. Anyị ga-agba mbọ nweta ozi bara uru dịka ọ dị na mbụ na Ikkaro. Nakọta ngwaọrụ, ịnwa ịkọwa echiche, na-eme ihe atụ Learningmụta igwe. Ngwa dị iche iche, dị ka IoT na mpempe akwụkwọ ọ bụla ịchọrọ.
Adịghị m ọkachamara. Anọ m na-amụ ihe mana ekwenyere m na m nwere ike itinye aka na ihe ọmụma m nwetara ma melite ya.
Ke ibuotikọ emi m na-ahapụ a Ntuziaka ntuziaka Anaconda na otu esi eji njikwa ngwugwu Conda gị. Site na nke a, anyị nwere ike ịmepụta gburugburu mmepe maka eke na R na ọba akwụkwọ anyị chọrọ. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịmalite imebi ihe na igwe mmụta, nyocha data na mmemme na Python.
Anaconda bụ nkesa n'efu na Open Source nke asụsụ mmemme Python na R ọtụtụ eji sayensị kọmputa (Science Science Data Science, Mmụta Ngwa, Sayensị, Injinia, nyocha amụma, Nnukwu data, wdg).
Ọ na-etinye ọtụtụ ngwa a na-ejikarị n'ọtụtụ ebe a n'otu oge, kama ịnwụnye ha n'otu n'otu. . Ihe kariri 1400 na nke a kacha eji ya eme ihe. Examplesfọdụ ihe atụ
Mgbe emechara ya Igwe mmụta igwe, M na-achọ ebe m ga-aga n'ihu. Ọnọdụ mmepe eji eme ihe na usoro Octave / Matlab abụghị ihe ndị mmadụ na-eji, yabụ ị ga-eme ka itu ahụ gaa ihe dị elu. N'etiti ndị aga-akwadoro m ọkachasị bụ Keras, na-eji backend TensorFlow. Agaghị m abanye ma Keras dị mma karịa ngwaọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ntanetị ma ọ bụ ịhọrọ TensorFlow ma ọ bụ Theano. M na-aga ịkọwa otu esi arụnyere ya na Ubuntu.
Nke mbụ m gbalịrị ịwụnye ya na akwụkwọ nke ibe gọọmentị, ma ọ gaghị ekwe omume, enwere m njehie mgbe niile, ajụjụ a na-edozighị. N'ikpeazụ m gara ile anya nkuzi doro anya banyere otu esi esi etinye keras na Ubuntu Ma ma ejiriwo m ụbọchị abụọ nọrọ ogologo oge n’abalị. Na njedebe m emezuola ya ma ahapụrụ m gị otu m siri mee ya ma ọ bụrụ na ọ nwere ike meghere gị ụzọ.
Dika anyi ga agbaso usoro ndi webatara webusaiti m gha ahapuru gi site na isi okwu na ngwụcha nkuzi, anyi ga e wunye PIP nke m na enweghi, ka ijikwaa ha. pip na Linux ọ bụ nke ahụ, usoro nchịkọta ngwugwu edere na eke.
sudo apt-nweta wụnye python3-pip sudo apt wụnye Python-pip
Emechaala m Coursera Machine Learning
Emechaala m Ihe omumu ihe igwe na enyere site na mahadum Stanford na Coursera, na ebe ọ bụ na e nweelarịrị ọtụtụ ndị jụrụ m n’ihu na nzuzo banyere ya, achọrọ m ịmatakwu ihe m chere na onye ọ bụla kpebiri ime ya maara ihe ha ga-ahụ.
Ọ bụ free N'ezie na Machine Mmụta, nke Andrew Ng kuziri. ozugbo emechara ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwere ike ịnwe asambodo na-akwado nka ndị emere maka € 68. Ekewara ya na ogidi 3, vidiyo, Nyocha ma ọ bụ Quizz na mmemme mmemme. Ọ bụ n’asụsụ Bekee. Have nwere ndepụta okwu n'asụsụ dị iche iche, mana Spanish anaghị adị mma ma mgbe ụfọdụ, ha anaghị agafe agafe, ọ ka mma ma ọ bụrụ na itinye ha n'asụsụ Bekee.
Ọ bụ nnọọ usoro iwu. Ma o nwere ike ịbụ ihe kpatara ya ji dị ka ụzọ dị mma isi bido n’ihi na ọ bụghị naanị na ị ga-amụta ihe ị ga-eme kama ihe mere ị ji eme ya.